यातायात कार्यालय ठुलोभरेङमा दैनिक रु. ५० हजार घुस असुली ?! | Janprabhabnews
यातायात कार्यालय ठुलोभरेङमा दैनिक रु. ५० हजार घुस असुली ?!
29th April 2021 , 7:54 मा प्रकाशित
काठमाडौं । भ्रष्टाचारका विरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्दै सरकारले जति जिब्रो फड्कारे पनि कर्मचारीतन्त्रीले भने पुराना तरिका छाडी नयाँ नयाँ शैलीमा भ्रष्टाचार गर्ने तरिका आविष्कार गरिरहेका छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारीचालक अनुमती पत्र, वाग्मती ठुलोभरेङमा कर्मचारीहरुले एउटै गलत कामबाट दैनिक रु. ५० हजारभन्दा बढी घुसस्वरुप असुल्ने गरेको जानकारी हुन आएको छ । यसरी घुस असुल्न उनीहरुले आधा दर्जनभन्दा बढी तरिकाहरु आविष्कार गरी प्रयोग गर्दै आएको श्रोत बताउछ । सो कार्यालयमा सञ्जय थापा कार्यालय प्रमुख र कम्प्युटर अधिकृतका पदमा वासुदेव रेग्मी कार्यरत छन् ।
दुई जनाको मिलोमतोमा त्यहा“ मोटरसाइकलको लिखित र ट्रायल परीक्षामा छिट्टै सामेल गराएवापत मात्र दैनिक रु. ५० हजारबढी घुसवापत असुल हुने गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा परिवहन मन्त्रालय श्रोतले उल्लेख गरेको छ । सवारीचालक अनुमतीपत्रका लागि अनलाइन फाराम भर्ने प्रक्रिया शुरु भएपछि अहिले सेवाग्राहीहरु कार्यालयमै पुगी फाराम भर्नुपर्ने झञ्झटबाट त मुक्त छन् । तर यही प्रक्रियालाई दुरुपयोग गरी कम्प्युटर अधिकृत वासुदेवमार्फत मासिक लाखौं रुपैयाँ उठाइने गरेको पीडितहरू गुनासाे गर्छन् ।
अनलाइन फाराम भर्नेहरुको नामावली र सो कार्यालयको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा लिने हालको क्षमता हेर्दा सन् २०२२ मार्चसम्मका लागि परीक्षार्थीहरु पूरा भइसकेका छन् । तीन पटकसम्म पनि प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मा असफल भए फेरि नयाँ फाराम भरी पालो कुर्नुपर्ने हालको नियम रहेको छ । यस प्रावधान बमोजिम सयौं परीक्षार्थीहरु मौखिकमा र अरु सयौं प्रयोगात्मक परीक्षामा असफल हुन्छन् । असफल परीक्षार्थीहरु तीन महिनापछि फेरि नयाँ फाराम भरी नयाँ परीक्षार्थीका रुपमा सहभागी हुने भएकाले पुराना दर्ता नम्बरहरु रिक्त हुँदै जान्छन् ।
पीडित सेवाग्राहीहरूका अनुसार, वासुदेवले बिचौलियाहरुले ल्याएका महिनौंसम्म नपर्खिकन तत्काल परीक्षामा सामेल हुन चाहने परीक्षार्थीहरुलाई पुराना दर्ता नम्बरमा सच्याएर उनीहरुका नाम लेखी एकदुई दिनमै परीक्षामा सहभागि गराउने गरेका छन् ।यसरी नपर्खीकन तत्कालै परीक्षामा सामेल गराएवापत वासुदेवलगायतको कर्मचारी समूहले प्रति परीक्षार्थी ५ हजार रुपैयाँ लिन्छन् । ठुले भरेङस्थित यातायात कार्यालयमा मोटरसाइलको सवारी चालक अनुमति पत्रको हरेक परीक्षामा दैनिक १० जना नपर्खीकन तुरुन्त सामेल हुने परीक्षार्थी हुने गरेका समाचार श्रोतको दाबी छ ।
वासुदेवको मात्र पहुँच हुने पुराना परीक्षार्थीहरुको दर्ता नम्बरमा उनले नया“ परीक्षार्थीको नाम, ठेगान, लिंग लगायत सबै सच्याउने गर्दछन् । यसअघि कम्प्युटर अधिकृतकै रुपमा भन्सार, कर कार्यालयहरुमा बसिसकेका वासुदेवको कमाईका बारेमा थाहापाउनेहरुले जिब्रो टोक्ने गरेका छन् । तर यता सरकार र अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेग भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा अलापेर बसिरहेको छ ।